Multi-inoshanda gland Vagadziri & vatengesi - China Multi-inoshanda gland Fekitori
Metal Cable Gland (Metric tambo)
Tinogona kukupa iwe nesimbi tambo tambo gland dzesimbi tambo yakagadzirwa nenickel-yakafukidzwa nendarira (Order No.: HSM-KZ), simbi isina simbi (Order No.: HSMS-KZ) uye aluminium (Order No.: HSMAL-KZ).
Tinogona kukupa EMC tambo dzesimbi dzakagadzirwa neickel-yakafukidzwa nendarira (Order No.: HSM-EMV.T), simbi isina chinhu (Order No.: HSMS-EMV.T) nealuminium (Order No .: HSMAL-EMV. T).
Tinogona kukupa iwe EMC tambo dzesimbi dzakagadzirwa nesimbi-yakafukidzwa nendarira (Order No.: HSM-EMV.SC), simbi isina simbi (Order No.: HSMS-EMV.SC) uye aluminium (Order No.: HSMAL-EMV. SC).
Tinogona kukupa EMC tambo dzesimbi dzakagadzirwa nenickel-yakafukidzwa nendarira (Order No.: HSM-EMV), simbi isina chinhu (Order No .: HSMS-EMV) uye aluminium (Order No .: HSMAL-EMV).
Yakakwira-temp Metal Cable Gland ine Multi Cores (Metric / PG tambo)
Tinogona kukupa iwe wepamusoro-temp simbi tambo masero ane akawanda macores akagadzirwa nenickel-yakafukidzwa ndarira (Order Kwete .: HSM.DS-M / nxd), simbi isina simbi (Order Kwete .: HSMS.DS-M / nxd) uye aluminium (Order Kwete.: HSMAL.DS-M / nxd).